एक बीमा कम्पनी एक अभिकर्ता ! | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय एक बीमा कम्पनी एक अभिकर्ता !
on: १५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०६:३१ सम्पादकीय
एक बीमा कम्पनी एक अभिकर्ता !
बीमा विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ५ ले एउटाभन्दा बढी बीमा कम्पनीको बीमा अभिकर्ता हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अभिकर्ताले जीवन वा निर्जीवन बीमाको एउटा मात्र कम्पनीबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । प्रचलित ऐनमा एक व्यक्तिले समान किसिमका एक वा एकभन्दा बढी कम्पनीबाट अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिई काम गर्न पाउने व्यवस्था रहिआएको छ । तर, प्रस्तावित ऐनमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको बीमा बजारमा लागू गर्न लागेको स्पष्ट हुन्छ । भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा अभिकर्ताले एउटै मात्र कम्पनीको अभिकर्ता भई बीमासम्बन्धी कामकारबाही गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बीमा समितिले केही वर्षअघि कार्यविधि बनाएर सोही अभ्यास नेपालमा पनि लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, बीमा अभिकर्ताले उक्त कार्यविधिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रीट हालेकाले उक्त प्रयास असफल भएको थियो ।
त्यस्तै विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ४ ले बीमा सर्भेयरले पनि निर्जीवन बीमाअन्तर्गत एउटा मात्र बीमाको सर्भे गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार अब अग्नि, मोटर, इञ्जिनीयरिङ बीमाको सर्भे छुट्टाछुट्टै बीमा सर्भेयरले गर्नेछन् । सम्बन्धित विषयमा योग्य व्यक्तिलाई सोहीअनुरूप इजाजतपत्र प्रदान गरिने भएकाले अब सर्भे कार्य प्रभावकारी र स्वच्छ हुने समितिले विश्वास लिएको छ ।
अभिकर्तामाथि यस्तो व्यवस्था थोपर्ने हो भने उनीहरूलाई न्यूनतम आम्दानी हुने सुनिश्चिित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा कतिपय विशुद्ध यही पेशामा लागेका अभिकर्ता पनि छन् ।
बीमा समितिले विधेयकमार्फत गरिन लागिएको नयाँ व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि अभिकर्ता र नयाँ बीमा कम्पनीका लागि भने समस्या देखिएको छ । हुन त यो व्यवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय उत्तम अभ्यास नै मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने केही समस्या देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटै मात्र कम्पनीको अभिकर्ता भई कम्पनीको बीमा योजना विक्री गरेर अभिकर्तालाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । साथै यो व्यवस्थाका कारण बीमितलाई सेवासुविधा दिन गाह्रो हुने पनि अभिकर्ताहरूले तर्क गरेका छन् । उनीहरूले जनताले विभिन्न कम्पनीका विभिन्न बीमा योजनामध्येबाट छनोट गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले सङ्कुचित गर्ने तर्क गरेका छन् । किनकि एउटै अभिकर्ताले फरकफरक कम्पनीका विभिन्न पोलिसीमध्ये छनोट गर्न पाउने सुविधा अहिले बीमा अभिकर्ताले लिँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि त्यस्तो हुन पाउँदैन । आफ्नो पहुँचमा भएको अभिकर्तासँग जस्तो पोलिसी छ त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अभिकर्तामाथि यस्तो व्यवस्था थोपर्ने हो भने उनीहरूलाई न्यूनतम आम्दानी हुने सुनिश्चिित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा कतिपय विशुद्ध यही पेशामा लागेका अभिकर्ता पनि छन् । यो व्यवस्था लागू भएसँगै त्यस्ता अभिकर्तालाई एउटा मात्र कम्पनीको पोलिसी बेचेर जीविकोपार्जन गर्नमै समस्या हुने स्पष्ट छ । अर्कातर्फ नयाँ बीमा कम्पनीले व्यावसायिक अभिकर्ता पाउन नसक्ने अवस्था पनि छ । किनकि व्यावसायिक अभिकर्ता स्थापित कम्पनीमै आबद्ध हुन्छन् । यसले नसँ कम्पनीहरू नयाँ अभिकर्तामा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि शत्रुता निम्तिने सम्भावना बढ्दै जान्छ । बीमा क्षेत्रमा रहेका समस्यामध्ये आममानिसमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास नहुनु पनि एक हो र यसले बीमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा आममानिस अभिकर्ता पेशामा आकर्षित हुने सम्भावना पनि कम छ । यसअनुसार नयाँ बीमा कम्पनीले व्यावसायिक र सक्रिय अभिकर्ता पाउन सक्दैनन् र पुरानै कम्पनीहरूको हातमा बीमा व्यवसाय केन्द्रित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो समस्याको समाधान नखोजीकन प्रस्तावित व्यवस्था लागू गर्न उचित देखि“दैन । समग्र बीमाक्षेत्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेका अभिकर्तालाई मर्का नपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अभिकर्तालाई मर्का पर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था लागू भएमा भर्खर बामे सर्न लागेको बीमाक्षेत्रलाई असर पर्ने निश्चित छ ।